ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်း ရှိ ငှားရန် Paradise Condo , ကွန်ဒို | ShweProperty.com
ငှားရန် - ကွန်ဒို - Paradise Condo
Place - Bahan Township Size - 1550 sqft Room Type - 1 Master Bed Room ,2Bedroom , Living Room , Kitchen Room , Parquet , Full Furniture , Ready to Stay. Per Month - $ 1600 (Nego) Facility : ☑️ Lift ☑️ Power Back Up ☑️ 24 Hour Security Staff ☑️ Car Parking .
Property ID: S-1176667
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Paradise Condo
New university Road
CRA-784, ရွှေဂုံတိုင်တာဝါတွင် အကျယ်(30x40) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-779, ပုလဲကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1450sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-765, ဒဂုံတာဝါတွင် အကျယ်(18½x58) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-758, ပုလဲကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1650sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-756, ရွှေတူကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1400sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-752, ရွှေဂုံတိုင်တာဝါတွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-749, ပုလဲကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1780sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-742, ပုလဲကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1450sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ငှားမည်။
CRA-729, အေးရိပ်သာကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(2000sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-715, ငွေဝတ်မှုန်တွင် ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-705, ဒဂုံတာဝါတွင် အကျယ်(1200sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-702, ရွှေဂုံတိုင်တာဝါတွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-701, မလိခကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1800sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း TandK Condo တွင် အခန်းငှားမည်
Fatherland Condo မြေညီထပ် ငှားမည်။
Code-7634 ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Royal Home Property
ဖုန်းဆက်ရန် 09257772775, 09257772776
building(B6) , Room 204 , Hantharwaddy housing , south okkalapa tsp , yangon , myanmar.
Shweproperty ID: S-1176667
Mobile 09260996994, 09402767111
Office no: 09257772775, 09257772776